Isivumelwano somhlaba ongenabundlobongela- IHlabathi Matshi
Ikhaya » Ileta yehlabathi ngaphandle kobundlobongela
"Umnqophiso weLizwe elingenabundlobongela" sisiphumo seminyaka eliqela yomsebenzi wabantu nemibutho ephumelele imbasa yoXolo lukaNobel. Uyilo lokuqala lwenziwa kwiNgqungquthela yeSixhenxe yeNobel Laureates ngo-2006 kwaye ingxelo yokugqibela yamkelwa kwiNgqungquthela yesibhozo ngoDisemba 2007 eRome. Amanqaku okujonga kunye nezindululo ziyafana kakhulu nezo sizibona apha kulo Matshi.
I-11 kaNovemba ka-2009, ngexesha leNgqungquthela Yehlabathi Ye-10 eyayiseBerlin, abaphumeleleyo INdel Peace Prize Bawubonisa la maXwebhu ngomhlaba ongenabundlobongela kubaxhasi baka Ihlabathi likaMatshi ngoxolo noKhuselo Baya kwenza njengabathunywa bexwebhu njengenxalenye yemigudu yabo yokwandisa ulwazi jikelele ngezobudlova. ISilo, umsunguli we-Universalist Humanism kunye nokuphefumlelwa kwe-World March, wathetha malunga nawo Injongo yoxolo kunye nokungabikho komthetho ngelo xesha.
Ubundlobongela buyisifo esichaziweyo
Akukho lizwe okanye umntu unokukhuseleka kwihlabathi elingakhuselekanga. Amaxabiso okungekho bundlobongela ayekile ukuba abe yenye indlela yokuba yimfuneko, zombini kwiinjongo, njengakwiingcinga nakwizenzo. Oku kuxabiseka kubonisiwe kwisicelo sabo kubudlelwane phakathi kwamazwe, amaqela kunye nabantu. Siqinisekile ukuba ukubambelela kwimithetho-siseko engenabundlobongela kuya kuzisa ucwangco lwehlabathi oluphucukileyo nolunoxolo, apho urhulumente onobulungisa nonempumelelo anokufezekiswa, ngentlonipho yesidima somntu kunye nobungcwele bobomi uqobo.
Inkcubeko yethu, amabali ethu kunye nobomi bethu bebodwa badibene kwaye izenzo zethu zixhomekeke kwelinye. Namhlanje kunanini na ngaphambili, sikholelwa ukuba sijamelene nenyaniso: eyethu yinto eqhelekileyo. Oko kugqitywa kuya kugqitywa ziinjongo zethu, izigqibo zethu kunye nezenzo zethu namhlanje.
Sikholelwa ngokunyanisekileyo ukuba ukudala inkcubeko yoxolo kunye nokungabikho kobundlobongela kuyinjongo efanelekileyo kwaye imfuneko, nokuba ngaba yinkqubo ende kwaye inzima. Ukuqinisekisa imigaqo echazwe kwiCharter yinyathelo ebaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukusinda nokuphuhliswa kwabantu kunye nokuphumeza ihlabathi ngaphandle kobundlobongela. Thina, abantu kunye nemibutho yanikezelwa ngeNobel Peace Prize,
Ukuqinisekiswa ukuzibophezela kwethu kwiSibhengezo soBuntu soLuntu,
Ukukhathazeka ngenxa yesidingo sokuphelisa ukusasazeka kobundlobongela kuzo zonke izigaba zoluntu kwaye, ngaphezu kwayo yonke into, ezisongweni ezisongela ubomi bentlalo;
Ukuqinisekiswa ukuba inkululeko yengcamango kunye neengongoma ziyingcambu yentando yesininzi kunye nobuchule;
Ukuqaphela ukuba ubundlobongela izibonakalisa ngeendlela ezininzi, mhlawumbi kungquzulwano ngezixhobo, yiMelika, ubuhlwempu, ukuxhatshazwa kwezoqoqosho, intshabalalo kokusingqongileyo, urhwaphilizo kunye intiyo esekelwe kubuhlanga, inkolo, isini okanye ukuziqhelanisa ngezesondo;
Ukulungisa ukuba ukuzukiswa kobundlobongela, njengoko kuboniswe ngorhwebo lokuzonwabisa, kunokubangela ukuba ukwamkeleka kobundlobongela njengemeko evamile kunye evumelekileyo;
Qi niseka ukuba abo baninzi abachaphazelekayo ngogonyamelo banobuthathaka kwaye baninzi abasengozini;
Ukuqwalasela ukuba uxolo alukho nje ukungabikho kobundlobongela kodwa kubakho ubulungisa kunye nenhlalakahle yabantu;
Ukuqwalasela ukuba ukungaqapheli ngokwaneleyo ukuhlukahluka kobuhlanga, kwenkcubeko nakwezenkolo kwiindawo ze-States kuyingcambu yobundlobongela obukhoyo kwihlabathi;
Ukuqaphela ukungxamiseka kophuhliso lwenye indlela yokhuselo ngokudibeneyo esekwe kwinkqubo apho kungekho lizwe, okanye iqela lamazwe, kufuneka libe nezixhobo zenyukliya kukhuseleko lwalo;
Unonophelo ukuba ihlabathi lifuna iindlela ezisemgangathweni zehlabathi kunye nezenzo ezingenabo ubudlova zokuthintela nokuthintela iingxabano, kwaye ezi ziyimpumelelo xa zivunywe kwisigaba sokuqala;
Ukuqinisekisa ukuba abo abanegunya elinamandla banelungelo elikhulu lokuphelisa ubundlobongela, naphi na apho kubonakala khona, kwaye ukukhusela xa kunokwenzeka;
Qi niseka ukuba imigaqo yokungabikho kobundlobongela kufuneka iphumelele kuwo onke amanqanaba omphakathi, kwakunye nakwiintsebenziswano phakathi kwamazwe kunye nabantu ngabanye;
Sibiza uluntu lwamazwe ngamazwe ukuba luthande ukuphuhliswa kwemigaqo elandelayo:
Kwihlabathi elixhomekeke kuyo, ukuthintelwa nokupheliswa kweengxabano ezixhobileyo phakathi kwamazwe kunye nakwamanye amazwe kufuna inxaxheba ebambini kwinxalenye yamazwe ngamazwe. Indlela efanelekileyo yokuqinisekisa ukuba ukhuseleko lwamaziko ngamnye kukuqhubela phambili ukhuseleko loluntu. Oku kudinga ukuqinisa amandla okuphunyezwa kweenkqubo ze-UN kunye nemibutho yabasebenzi yentsebenziswano.
Ukufezekisa ihlabathi ngaphandle kobundlobongela, amazwe kufuneka ahlale ehlonipha umthetho wolawulo kwaye ahloniphe izivumelwano zawo zomthetho.
Kubalulekile ukuqhubeka ngaphandle kokulibaziseka ngokukhawuleza ekuphelisweni okuqinisekileyo kwezixhobo zenuzi kunye nezinye izixhobo zokutshabalalisa. Amazwe abamba izixhobo kufuneka athathe amanyathelo angqinelanayo ekuthintela ukungabikho kwemida kwaye amkele inkqubo yokukhusela engaxhomeki ekukhuselweni kweekliya. Ngexesha elifanayo, amazwe kufuneka azame ukuhlanganisa ulawulo lwenyukliya engekho ukungabikho komonakalo, kunye nokuqinisa iinkcukacha ezininzi, ukukhusela izinto zenyukliya kunye nokwenza ulwaphulo-mthetho.
Ukunciphisa ubundlobongela kuluntu, ukuveliswa kunye nokuthengiswa kwezixhobo ezincinci kunye nezixhobo ezikhanyayo kufuneka zancitshiswe kwaye zilawulwe ngokuqinileyo kumazinga ngamazwe ngamazwe, angingqi, angingqi. Ukongezelela, kufuneka kubekho isistim kunye nesisonke sokusebenza kwezivumelwano ngezizwe ngezizwe, malunga ne-1997 Mine Ban Treaty, kunye nenkxaso yemigudu emitsha ekujoliswe ekupheliseni impembelelo yezixhobo ezingakhethiweyo kunye nezixhobo ezisebenzayo. amaxhoba, njengemimandla yeqoqo.
Ubundlobongela abukwazi ukulungiswa, ngenxa yokuba ubudlova buyenza ubundlobongela kwaye kungekho nto yokwesabisa abantu abemi beliphi na ilizwe elinokuthi liqhutyelwe egameni lesiphina isizathu. Ulwa lokulwa nobutshaba alukwazi, kodwa, lucacisa ukuphulwa kwamalungelo abantu, umthetho wamazwe ngamazwe, imigangatho yoluntu kunye nentando yesininzi.
Ukuphelisa ubundlobongela basekhaya kunye nosapho kufuna intlonipho engenamiqathango yokulingana, inkululeko, isidima kunye namalungelo abasetyhini, amadoda nabantwana, kwicala labo bonke abantu kunye namaziko kaRhulumente, inkolo kunye imibutho yoluntu. Olo londolozo kufuneka lubandakanywe kwimithetho yasekuhlaleni nakwamanye amazwe.
Zonke izabelo uxanduva ngamnye urhulumente ukuthintela ubundlobongela obujoliswe abantwana kunye nabantu abatsha, abamele ingomso lethu efanayo kunye asethi zethu zexabiso, kwaye kukhuthazwe amathuba emfundo, ufikelelo kukhathalelo lwempilo olusisiseko, ukhuseleko lobuqu, ukhuseleko lwentlalo kunye nokuxhaswa kwendawo eqinisa ukungabikho gonyamelo njengendlela yokuphila. Imfundo ngoxolo, ekhuthaza ukungahambisani nobudlova kunye nokugxininiswa kwintengiselwano njengekhwalithi yangasese yoluntu kufuneka ibe yinxalenye ebalulekileyo yeenkqubo zemfundo kuwo onke amanqanaba.
Ekuthinteleni iingxabano ezivela ngokuncipha kwezibonelelo zendalo kunye ingakumbi imithombo yamanzi namandla, icela States ukuphuhlisa indima ebonakalayo kunye nokuqalisa iinkqubo zomthetho kunye nemizekelo ezinikelwe ukhuselo lokusingqongileyo kunye nokukhuthaza ukuqulatha ukusetyenziswa kwayo kusekelwe kukufumaneka kwezibonelelo kunye neemfuno zoluntu zangempela
Sibiza kwiZizwe eziManyeneyo kunye namazwe alo malungu ukukhuthaza ukuqonda ngokucacileyo ukuhlukahluka kohlanga, inkcubeko kunye nenkolo. Umthetho wegolide wehlabathi elingenabo nogonyamelo: "Bambeni abanye njengokuba ungathanda ukuphathwa."
Izixhobo zopolitiko Inqununu awuhloniphe kwihlabathi non-enamandla kumaziko yedemokhrasi dialogue esekelwe kwisidima, ulwazi kunye nokuzimisela, lwenziwe ngokusekelwe ukulingana phakathi kwamaqela, kwaye, apho kufanelekileyo, sihlale sikhumbula nayo imiba yoluntu ngokubanzi kunye nendalo yendalo apho ihlala kuyo.
Wonke amazwe, amaziko kunye nabantu ngabanye kufuneka baxhase iinzame zokunqoba ukungalingani ekuhanjisweni kwezibonelelo zezoqoqosho kunye nokuxazulula ukungalingani okukhulu okudala umhlaba ovelisa udlame. Ukungabikho kwimeko kwiimeko zokuphila kungaholela ekungabikho kwamathuba kwaye, kwiimeko ezininzi, ukulahlekelwa ithemba.
Imibutho yasekuhlaleni, kuquka abantu abalwela amalungelo oluntu, imfazwe kunye namatsha kwezendalo kufuneka kuqatshelwe kwaye akhuselwe njengoko kubalulekile ekwakheni ihlabathi nengenabo njengoko bonke oorhulumente kufuneka akhonze abemi balo hayi ukuba ngokuchaseneyo. Imiqathango kufuneka yenziwe ukuba ivumeleke kwaye ikhuthaze ukuthatha inxaxheba yoluntu, ikakhulukazi abasetyhini, kwiinkqubo zezopolitiko kumazinga omhlaba wonke, wengingqi, kazwelonke nakwasekhaya.
Xa sisebenzisa imigaqo yale Tshatha, siphendukela kuthi sonke ukuze sisebenzisane sililizwe elinobulungisa nelinokubulala, apho wonke umntu enelungelo lokungabulawa, kwangaxeshanye, uxanduva lokungabulali. kuye nawuphina umntu
Ukutyikitywa kweTshatha yehlabathi ngaphandle kobundlobongela
ukuba ukulungisa zonke iintlobo zobundlobongela, sikhuthaza uphando lwezenzululwazi kwimida yokusebenzisana kwabantu kunye nencoko, kwaye simema imfundo, inzululwazi nakwiindawo zonqulo ukuba zisincede ekutshintsheni kwintlangano engeyiyo enobudlova nokungabulali. Tyikitya iCharter yehlabathi ngaphandle koBundlobongela
Ubungcwele bakhe iDalai Lama
UMbhishophu omkhulu uDesmond Mpilo Tutu
Oogqirha bamazwe ngamaZwe okuPhephelwa kweMfazwe yeNyukliya
I-Arhente yamazwe ngamazwe e-Atomic Energy
IKomiti yeeNkonzo zaseMelika
Ofisi yeZizwe zoxolo
Abaxhasi bale Tshatha:
UMasipala waseCagliari, e-Itali
Iphondo leCagliari, e-Itali
UMasipala waseVilla Verde (OR), e-Itali
UMasipala waseGrosseto, e-Itali
UMasipala waseLesignano de 'Bagni (PR), e-Itali
UMasipala waseBagno eRipoli (FI), e-Itali
UMasipala waseCava Manara (PV), e-Itali
UMasipala weFaenza (RA), e-Itali
Abantu boxolo, Belfast, Northern Ireland
Inkumbulo yoMbutho Collettiva, Umbutho
Hokotehi Moriori Trust, eNew Zealand
Umhlaba ngaphandle kweemfazwe kwaye ngaphandle kobundlobongela
Iziko lehlabathi leZiko loLuntu (CMEH)
Uluntu (loluntu uphuhliso), i-World Federation
Ukudibana kweeNkcubeko, iHlabathi yeLizwe
I-International Federation yamaQumrhu oLuntu
Umbutho "iCádiz yoLwaphulo-mthetho", Spain
Abafazi beSiseko seZizwe eziManyeneyo, (e-United Kingdom, e-India, kwa-Israyeli, nase-Cameroon, eNigeria)
IZiko loxolo kunye neziFundo zaBucala, ePakistan
Umbutho Assocodecha, Mozambique
Isiseko se-Awaz, iZiko leeNkonzo zoPhuculo, ePakistan
IEurafrica, iMulticultural Association, eFrance
Imidlalo yoxolo i-UISP, e-Itali
Iklabhu yaseMoebius, eArgentina
I-Centro kwi-lo sviluppo yokuyila "iDanilo Dolci", e-Itali
I-Centro Studi ed European Initiative, e-Itali
IZiko loKhuseleko lweHlabathi, eMelika
I-Gruppo Emergency Alto Casertano, e-Itali
Umbutho waseBolivia waseIndiya, Bolivia
Il sentiero del Dharma, e-Itali
I-Gocce di fraternità, i-Itali
Isiseko seAguaclara, eVenezuela
I-Associazione Lodisolidale, e-Itali
IMfundo yamaLungelo oluNtu kunye neQhinga eliSebenzayo lokuThintela ukuNgqubana, eSpain
ETOILE.COM (Agence Rwandaise d'Edition, de Recherche, de Presse et de Unxibelelwano), Rwanda
Umbutho woLutsha waMalungelo oLuntu, e-Itali
Umbutho wokuziphatha kwiCÉGEP yaseSherbrooke, eQuebec, Canada
I-Federation of Institutions yabucala yabantwana, uLutsha kunye noKhathalelo lweSapho (i-FIPAN), eVenezuela
Iziko iCommunautaire Jeunesse Unie de Parc Ulwandiso, eQuébec, Canada
Oogqirha ngoSindiso lweHlabathi, eCanada
I-UMOVE (Umama oManyeneyo oChasayo ubundlobongela kuyo yonke indawo), eCanada
Iigranti eziGuqukayo, eCanada
I-Veterans Ngokuchasene ne-Nuclear Arms, Canada
IZiko lokuFunda eliguqukayo, kwiYunivesithi yaseToronto, eCanada
Abaxhasi boxolo kunye nokungadibani, eSpain
I-ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), e-Itali
I-Legautonomie Veneto, e-Itali
I-UISP Lega Nazionale Attività Subacquee, e-Itali
Commissione Giustizia e Pace di CGP-CIMI, e-Itali
Mnu. Walter Veltroni, Owayesakuba nguSodolophu waseRoma, e-Itali
Umnumzana uTadatoshi Akiba, uMongameli weSithili seXolo kunye nosodolophu waseHiroshima
Umnumzana Agazio Loiero, iRhuluneli yoMmandla weCalabria, e-Itali
UProf Sw Swathanathan, Owayesakuba nguMongameli weeNkomfa zePugwash kwiSayensi neMicimbi yeHlabathi, uMbutho weNobel Peace Prize
UDavid T. Ives, iZiko lika-Albert Schweitzer
UJonathan Granoff, uMongameli weZiko loKhuseleko lweHlabathi
UGeorge Clooney, umdlali weqonga
UDon Cheadle, umdlali weqonga
UBob Geldof, imvumi
UTomás Hirsch, isithethi seHumanism kwiLatin America
UMichel Ussene, isithethi seHumanism kwiAfrika
UGiorgio Schultze, isithethi seHumanism kwiYurophu
USudhir Gandotra, Isithethi seHumanism yoMmandla weAsia-Pacific
UMaria Luisa Chiofalo, uMcebisi kuMasipala wasePisa, e-Itali
USilvia Amodeo, uMongameli weSiseko saseMeridion, eArgentina
UMiloud Rezzouki, uMongameli woMbutho we-AODEC, eMorocco
U-Angela Fioroni, uNobhala weNgingqi weLegautonomie Lombardia, e-Itali
U-Luis Gutiérrez Esparza, uMongameli weSekethe ye-Latin American Circle yeZizwe eziManyeneyo (i-LACIS), eMexico
UVittorio Agnoletto, owayeselilungu lePalamente yaseYurophu, e-Itali
U-Lorenzo Guzzeloni, uSodolophu we-Novate Milanese (MI), e-Itali
U-Mohammad Zia-ur-Rehman, uMnxibelelanisi weSizwe we-GCAP-Pakistan
URaffaele Cortesi, USodolophu waseLugo (RA), e-Itali
URodrigo Carazo, owayesakuba nguMongameli waseCosta Rica
ULucia Bursi, uSodolophu kaMaranello (MO), e-Italiya
UMiloslav Vlček, uMongameli weNdlu yeeNgwevu kwiRiphabhliki yaseCzech
Simone Gamberini, USodolophu weCasalecchio di Reno (BO), e-Itali
U-Lella Costa, u-Actress, e-Italy
Luisa Morgantini, owayesakuba nguSekela-Mongameli wePalamente yaseYurophu, e-Itali
U-Birgitta Jónsdóttir, ilungu lePalamente yase-Iceland, uMongameli wabahlobo beTibet e-Iceland
U-Italo Cardoso, uGabriel Chalita, uJosé Olímpio, uJamil Murad, uQuito Formiga, uAgnaldo
UTimóteo, uJoão Antonio, uJuliana Cardoso u-Alfredinho Penna ("iPalamente ePhambili yeNkxaso yeHlabathi yoKwazisa ngoxolo kunye neNão Violência eSão Paulo"), eBrazil
Katrín Jakobsdóttir, UMphathiswa Wezemfundo, iNkcubeko kunye neNzululwazi, i-Iceland
U-Loredana Ferrara, uMcebisi wePhondo lasePrato, e-Itali
Ali Abu Awwad, Ihlaseli loxolo ngokuphathwa gadalala, ePalestine
UGiovanni Giuliari, uMcebisi kuMasipala waseVicenza, e-Itali
URémy Pagani, USodolophu waseGeneva, eSwitzerland
UPaolo Cecconi, uSodolophu waseVernio (PO), e-Itali
UViviana Pozzebon, imvumi, iArgentina
UMax Delupi, intatheli kunye nomqhubi, eArgentina
UPáva Zsolt, uSodolophu wasePécs, eHungary
UGyörgy Gemesi, uSodolophu waseGödöllő, uMongameli wamaGunya aseKhaya, eHungary
UAgust Einarsson, unjingalwazi weDyunivesithi yaseBifröst, eIceland
USvandís Svavarsdóttir, Umphathiswa Wezendalo, eIceland
USigmundur Ernir Rúnarsson, iLungu lePalamente, i-Iceland
UMargrét Tryggvadóttir, iLungu lePalamente, i-Iceland
IVigdís Hauksdóttir, iLungu lePalamente, i-Iceland
UAnna Pála Sverrisdóttir, iLungu lePalamente, i-Iceland
U-Thráinn Bertelsson, iLungu lePalamente, e-Iceland
Sigurður Ingi Jóhannesson, iLungu lePalamente, i-Iceland
U-Omar Mar Jonsson, USodolophu waseSudavikurhreppur, e-Iceland
URaul Sanchez, Unobhala Wamalungelo Abantu kwiPhondo leCordoba, eArgentina
U-Emiliano Zerbini, Umculi, iArgentina
IAlmut Schmidt, uMlawuli kaGoethe Institut, eCordoba, eArgentina
Asmundur Fridriksson, USodolophu waseGardur, eIceland
I-Ingibjorg Eyfell, uMlawuli weSikolo, iGeislabaugur, iReykjavik, i-Iceland
U-Audur Hrolfsdottir, uMlawuli weSikolo, i-Engidalsskoli, Hafnarfjordur, Iceland
U-Andrea Olivero, uMongameli weSizwe we-Acli, e-Italiya